Solar Power System Fires Na gbawara Rooftop Isolator switches
Enweela ọtụtụ ọkụ na New South Wales na izu gara aga ma ọ bụ karịa metụtara sistemụ ike anyanwụ - ma ọ dịkarịa ala abụọ na-eche na ọ bụ ndị na-eme ka ndị na-ekewapụ ụlọ na-ebute. Nyaahụ, Fire na Nnapụta New South Wales kwuru na ọ gara otu ihe mere n'ụlọ na Woongarrah ...
Igwe kachasị mma e kere na mbara igwe a bụ ahụ mmadụ. Ọ nwere usoro nchekwa onwe onye magburu onwe ya na usoro mmezi onwe ya. Ọbụna sistemụ ọgụgụ isi ahụ chọrọ nrụzi na ndozi oge ụfọdụ. Ya mere, usoro ọ bụla mmadụ mere, gụnyere nrụnye PV nke anyanwụ. N'ime anyanwụ inst ...
Igwe eletrik zuru ezu nke igwe eletrik chọrọ ihe dị iche iche iji mepụta ọkụ eletrik, gbanwee ike gaa na nke ugbu a nke ndị ọrụ ụlọ nwere ike iji, chekwaa ọkụ eletrik ma chekwaa nchekwa. Solar Panels Solar ogwe na-t ...
Anyanwụ kọwara fotovoltaics na ọkụ eletrik
Mkpụrụ ndụ fotovoltaic na-agbanwe ìhè anyanwụ ka ọ bụrụ ọkụ eletrik Igwe fotovoltaic (PV), nke a na-akpọkarị sel nke igwe, bụ ngwaọrụ na-abụghị igwe na-agbanwe ọkụ anyanwụ ozugbo na ọkụ eletrik. Cellsfọdụ mkpụrụ ndụ PV nwere ike ịgbanwe ọkụ latrik ka ọ bụrụ ọkụ eletrik. Photon na-ebu ike anyanwụ Anyanwụ mejupụtara ...
Kedu ihe mere ị ga-eji gaa maka fotovoltaics?
site ha na 20-06-25
Ebu ụzọ kpọọ okwu ahụ fotovoltaics (PV) n'ihe dị ka 1890, ọ sitere n'okwu Grik: foto, 'phos,' nke pụtara ìhè, na 'volt,' nke na-ezo aka na ọkụ eletrik. Ya mere, fotovoltaic pụtara ọkụ ọkụ, na-akọwa kpọmkwem ụzọ ihe foto na fotovoltaic si arụ ọrụ. Fotovoltaic ...
Gịnị bụ fotovotaics?
site ha na 20-06-19
Photovoltaics bụ ntụgharị ntụgharị nke ọkụ n'ime ọkụ eletrik na ọkwa atọm. Materialsfọdụ ihe na-egosipụta ihe onwunwe a maara dị ka mmetụta foto nke na-eme ka ha banye photon nke ọkụ ma hapụ ndị elektrọn. Mgbe ndị electrons a weghaara, electri ...